warkii.com » Chelsea Doonaysa Xiddigo Barca & United Muhiim U Ah, Man City Oo Lagu Qabsaday Ake Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa
Chelsea Doonaysa Xiddigo Barca & United Muhiim U Ah, Man City Oo Lagu Qabsaday Ake Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa
Suuqa iibka ciyaartoyga ayaa si ramsi ah u furmi doona July 27, waxaanay kooxuhu si toos ah u bilaabi doonaan inay lasoo wareegaan ciyaartoyda ay danaynayaan, laakiin inta ka horreysa ayay iyaguna dhacayaan heshiisyo qaab qaddimaad ah ay kooxuhu usii samaynayaan, maadaama lasoo gabogabeeyey horyaalladii waaweynaa qaarkood sida Bundesliga iyo LaLiga.
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu si joogto ah idiinku soo gudbinaa xogta u dambaysa ee suuqa, hadal-haynta, xanta iyo xanta jirta intaba, waxaananu maanta oo Arbaca ah idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada Yurub:
Chelsea ayaa isku diyaarinaysa inay dalab £170,000 Gini uu toddobaadkii ku qaadanayo u dirto goolhayaha Manchester United ee Dean Henderson oo waqtigan amaah ugu maqan Sheffield United. (Manchester Evening News)
Goolhaye Henderson wuxuu doonayaa inuu sannad kale oo amaah ah kula sii joogo Sheffield United haddii aanay Manchester United u xaqiijinin inuu noqonayo goolhayaha koowaad oo booska looga saarayo David de Gea oo 29 jir ah. (Times)
Chelsea waxa kale oo ay isku dayi doontaa inay lasoo saxeexato goolhayaha Barcelona iyo xulka qaranka Germany ee Marc-Andre ter Stegen oo ay da’diisu tahay 28 jir, waxaanay qorshaynaysaa in heshiiska uu qayb ka noqdo goolhayaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga oo 25 jir ah. (Mundo Deportivo)
Blues waxay dalab rasmi ah ka gudbin doontaa laacibka khadka dhexe uga ciyaara Bayer Leverkusen iyo Germany ee Kai Havertz oo 21 jir ah, marka uu dhamaado tartanka Champions League. (ESPN)
Manchester City waxay qarka u saaran tahay inay ku guuleysato dagaalka ay ugu jirto garabka Valencia ee Ferran Torres oo ah 20 jir ay ku xafiiltamayaan Borussia Dortmund. (Bild)
Manchester United iyo Chelsea ayaa ku biiray tartanka loogu jiro difaaca reer Netherlands ee Nathan Ake oo ah 25 jir ka tirsan Bournemouth. (Sun)
Tababaraha Arsenal, Mikel Arteta ayaa kalsooni ku qaba in weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo 31 jir uu saxeexi doono heshiis cusub. (Independent)
Mulkiilaha Leeds United ayaa sheegay inay suurtogal tahay in kooxdiisu la saxeexato weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani oo uu ka dhamaaday qandaraaskiisii PSG. Leeds United ayaa usoo dallacday horyaalka Premier League. (Sky Sports Italia)
Everton waxay heshiis shaqsi ah la gaadhay khadka dhexe ee Southampton iyo Denmark ee Pierre-Emile Hojbjerg oo 24 jir ah, kaddib markii ay Saints ogolaatay in laacibkeedan ay ku iibiso £25 milyan oo Gini. (Daily Echo)
Tababaraha Newcastle United ee Steve Bruce wuxuu sii xajisan doonaa shaqadiisa haddii Henry Mauriss oo uu noqdo mulkiilaha kooxda. Waxa uu Henry kula loollamayaa iibsiga naadiga boqortooyada Sucuudiga. (Telegraph)
Goolhayaha Paris St-Germain ee Alphonse Areola oo ah 27 jir amaah ugu maqnaa Real Madrid, kulana guuleystay horyaalka LaLiga ayaa guri ka iibsaday magaalada London, waxaanu kusii jeedaa horyaalka Premier League. (Marca)